Noocyada saacadaha ugu fiican: xarrago ugu badnaan curcurka | Ragga Stylish
Ma qorsheyneysaa inaad maal gashato gabal cusub oo loogu talagalay curcurkaaga? Marka, shaki la'aan, waa inaad ogaataa kuwa hadda ah kuwa ugu wanaagsan ee daawashada suuqa.
Ku raaxeysiga sumcad adduunka ah, Kuwa soo socdaa waa astaamaha si fiican uga warqaba habka loo abuurayo saacad wanaagsan oo ragga ah, qaar raaxo leh iyo kuwo kale oo la awoodi karo.
1 Saacadaha Switzerland, waa dammaanad tayo
2 Saacadaha aan Swiss ahayn
Saacadaha Switzerland, waa dammaanad tayo
Haddii aad raadineyso tayo, khabiir kasta oo aad weydiiso ayaa kuu sheegi doona taas Saacadaha Switzerland samaysay waxay sii wadaan inay noqdaan sharad aamin ah.
Noocyada saacadaha ugu fiican waxay ku yaalliin Switzerland, waddankan yar ee Yurub wuxuu hoy u yahay tiro badan oo soosaarayaasha saacadaha raaxada ah, oo ay ku jiraan noocyada muhiimka ah sida soo socota, oo aan ku dalbanno qaab xarfaha oo aan ku xallin tayada, maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin heerar aad u sarreeya:
Marka laga hadlayo soo saarayaashaas, ereyga "waaya-aragnimo dheer" wuu gaagaaban yahay. Waana in la aasaasay wax aan ka yarayn qarnigii sagaal iyo tobnaad, qaar ka hor xitaa. Qashin-qubka, tayada ugu muhiimsan ee saacaddu tahay inay lahaato, sida saxnaanta ama adkeysiga, waxay ka badan tahay dammaanadda. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad lacagtaada ku maalgelin karto nabadgelyo buuxda oo maskaxeed.
Omega Speedmaster Xirfadle
Rolex iyo Omega waa kuwa ugu caansan magacyada saacadaha adduunka. Rolex-ka cajiibka ah waxaa lagu gartaa adayga iyo ku-dhaqanka qaababkeeda, GMT-Master II iyo Submariner oo ka mid ah moodooyinka ugu caansan. Si kastaba ha noqotee, astaamahan ayaa dhacaya in moodal kasta uu yahay sharad wanaagsan. Go'aaminta mid kaliya oo aan looheyn kuwa kale waa arin doorbid shaqsiyeed.
Omega, dhinaceeda, waxay ku faani kartaa inay tahay nooca xulashada ee George Clooney, iyo sidoo kale waxa laga yaabo inay tahay astaanta ugu weyn ee xarrago lab, James Bond. Laakiin waxa Omega u gashado si sharaf leh, oo layaabna ma leh, waa iskaashi dheer oo guul leh oo ay la yeelatay NASA.
Haddii aan ka hadalno Omega, kama baaqi karno inaan xusno sida cajiibka ah ee dhammaan moodooyinkeedu yihiin. Khadadka kor ku xusan waxaad ku arki kartaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan: Omega Speedmaster Professional. Sidoo kale Waxaa loo yaqaan The Moonwatch, kani waa saacadii uu xirtay cirbixiyeenka caanka ah Buzz Aldrin markii uu cagta saaray dayaxa dushiisa 1969.
Dhibaatooyinka Grand Patek Philippe
Si kastaba ha ahaatee, Nooca ugu gaarka ah ee sumcadda weyn leh ayaa laga yaabaa inuu yahay Patek Philippe. Kordhay qaybta shaqooyinka farshaxanka, qaybaha ka tagaya wershadooda ayaa sidaa yeelaya iyagoo horey uhelay dhamaan farsamada farsamada gacanta ee saacadu heli karto. Caadi ahaan, raadintaan joogtada ah ee heer sare leh xarfaha waawayn waxay ku cadahay qiimaha ugu dambeeya ee xiddigiska ee ay ku gaarayaan suuqa.
Si kale haddii loo dhigo, qeybihiisa khayaaliga ah, sida Calatrava, Nautilus ama Dhibaatooyinka Dhibaatooyinka Weyn, nasiib darro waxaa loo heli karaa in yar. Sikastaba xaalku ha ahaadee, xaqiiqda kaliya ee laga fikirayo ayaaba durba u ah raaxo dhab ah, gaar ahaan kuwa xiiseeya tababarka.
Marka laga hadlayo noocyada saacadaha raaxada ee Switzerland, dhammaantood waxay leeyihiin taariikh yaab leh, laakiin Breguet ayaa si gaar ah uga dhex muuqda arrintaas. Horudhac horumarro badan oo markii dambe dhiirrigeliyay soosaarayaasha kale, Breguet waxaa lagu tiriyaa inuu sameeyay mid ka mid ah saacadihii ugu horreeyay taariikhda. Mid ka mid ah saacadaha ugu caansan waa Classique, oo aad ka arki karto khadadkaas. Si kastaba ha noqotee, nooca ugu da'da weyn ee firfircoon waa Blancpain.
Maaddaama heerka tayada uu aad isugu eg yahay, markaad dooranayso saacad raaxo leh, dookhaaga shaqsiyeed ee ku saabsan shaqada, sifooyinka iyo naqshadda gabalku wuxuu ciyaarayaa. Ma waxaad raadineysaa hal-abuurnimo? Hadday sidaas tahay oo koontadaada bangiga ay u oggolaato, Jaeger-Le Coultre waa astaan ​​mudan in laga fiirsado. Haddii aad doorbideyso dhiirigelinta isboortiga, tixgeli TAG Heuer, oo si dhow ugu xiran isboortiga iyo adduunka isboortiga., ama taariikhiyada Breitling ee raaxada iyo waxqabadka badan.
Liiska shirkadaha saacadaha ee Switzerland aad buu u ballaadhan yahay. Haddii aad raadineyso gabal u gaar ah curcurkaaga, noocyada soo socda sidoo kale kuuma niyad jabi doonaan:
Saacadaha aan Swiss ahayn
Saacadaha Switzerland waxay ku raaxaystaan ​​sharaf weyn, laakiin waa inaanan iloobin taas, inagoo ah kuwii Switzerland looga dhigay sharad aamin ah, sidoo kale waxaa jira soosaarayaal waawayn oo saacado ku baahsan aduunka oo dhan.
Waxyaabahan soo socda ayaa shaki la’aan ka mid ah kuwa ugu caansan kuwa aan ahayn kuwa Switzerland. Sidaa awgeed, waa inaad sidoo kale fiirisaa ururintooda haddii aad kaliya u rabto waxa ugu fiican curcurkaaga. Sida qaar ka mid ah noocyada Swiss (Jaguar, Ferrari, Tissot ...), qaar ka mid ah noocyada soo socda ayaa soo bandhigaya moodallo qiimo aad u wanaagsan ku leh lacag, marka haddii aad raadineyso saacad wanaagsan oo jaban, waa inaad sidoo kale fiirisaa soosaarayaasha buugga ma Swiss sida Citizen, Seiko ama Festina.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » fashion » Noocyada daawashada ugu fiican